4 Free Useful WordPress Framework Themes | My Burmese Blog
4 Free Useful WordPress Framework Themes	On January 14, 2009	by Htoo Tay Zar	With	4 Comments	- WordPress	WordPress Themes Framework ဆိုတာက တကယ်တော့ ဒီဇိုင်းပါတဲ့ WP Themes တွေ မဟုတ်ပါဘူး.. ဒါက ဒီဇိုင်နာတွေ အတွက် အလွယ် တကူ design လုပ်လို့ ရအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ plain themes တွေပါ။ သူရဲ့ တည်ဆောက်ထားပုံကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင် ယူနိုင်ပါတယ်။ သူကတော့ အခြေခံ html tag တွေနဲ့ အခြား ဘာမှမပါပါဘူး။ ဒီလို Framework နဲ့ လုပ်ရတာက အားလုံးကို အစကနေ စလုပ်တာထက် အချိန်ကုန်ပို သက်သာပါတယ်။ နောက် plug in, sidebar တွေ အဆင်ပြေပြေ ထည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲ အဲဒီ framework က default CSS, read me ဖိုင် တွေတော့ မလုပ်ခင် သေသေချာချာ ဖတ်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ framework theme နဲ့ လုပ်တာတောင် လည်နေတုန်းပဲ ဒီ ၂၀၀၉ ထဲမှာ ကိုယ်ပိုင် theme ပြောင်းဖြစ်မှာပါ။ အခု ကျွန်တော်လဲ နောက် လင့်ရှာရလွယ်အောင် ပို့စ်တင်ထားတယ်.. WordPress framework theme တွေပါ။ WP Framework Theme
WP Framework isa“blank” WordPress theme that empowers you to create awesome WordPress Themes in little to no time!
WP Framework Theme by WP Framework
Sandbox Theme by Plaintxt.Org
Whiteboard Theme by Plain Beta
For those looking forabeautifully-designed free theme, I’m afraid you’ve come to the wrong place, but this will hopefully assist those of you who make your own WordPress themes regularly. ~ by Elliot Jay Stocks.
Download, Web Design, WordPress	4 Comments	အဇ္ဈတ္တပြခန်း
ကိုယ့်လူရေ.. သေချာဖတ်မှတ်သွားတယ်ဗျာ… ရေးသားပို့ချချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ
Like or Dislike:00	အဇ္ဈတ္တပြခန်း
သိချင်တာတွေတော့ များသားဗျ နောင်မှ လာမေးတော့မယ်..
အဇ္ဈတ္တပြခန်း @ ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ သိချင်တာရှိရင် မေးပါဗျာ ကျွန်တော် မသိရင် သိတဲ့သူတွေဆီ ထပ်မေးပေးပါ့မယ်..
Like or Dislike:00	ကျော်မြင့်ဦး
မင်္ဂလာပါ ထူးတေဇာ။ လာရောက်လေ့လာသွားပါတယ်။